Shirka London toos ugala soco qoraal bartan internetka - BBC Somali - Warar
Shirka London toos ugala soco qoraal bartan internetka
Nagala soo xiriir Dhag sii Facebook , Dhag sii Twitter iyo fariimaha qoraalka ee mobileka numberkiisu yahay +44 77 862 000 90
Faallo toos ah
Dib u cusbooneysii
17:35 Intaas aan ku hakinno qoraalka tooska, faahfaahinta kala soco Raadiyaha BBC Somali.
17:15 Shirka ayaa ku dhiirigaliyay Qaramada Midoobay in howlgalka uu bilowdo marka la gaaro 3-da bisha June.
17:05 Waxaa war murtiyeedku sheegay in shirku aqoonsaday doorka qaramada midoobay iyo midowga africa ee Soomaaliya. Waxaa kalo la soo dhoweeyay abuuritaanka Howlgal cusub oo Qaramada Midoobay ah UNSOM ee Soomaaliya.
17:00 Waxaa ka mid ah siyaasadda, amniga, cadaaladda, aasaaska dhaqaalaha, daqliga iyo adeegyada.
17:00 Waxaa ka qaybgalayaasha shirku soo dhoweeyeen dadaalka Soomaaliya ee in la sameeyo qorshe dib u dhis oo ay ku wadajiraan dhamaan muhiimadaha Soomaalida.
16:55 War murtiyeedka waxaa lagu xusay in xoogga la saarayo ballanqaadka dowladda ee fulinta heshiis cusub ee dalalka nugul nidaamka heshiis ku salaysan.
16:53 Shirka oo ay ka soo qaybgaleen madaxda in ka badan konton dal, ayaa lagu aqoosday baahida in la xoojiyo si deg deg ah horumarka ilaa hadda la sameeyay, laguna celiyo go'aanka taageeridda Soomaaliya ee mudada dheer.
16:49 War murtiyeedka ka soo baxay shirka ayaa lagu taliyay ka soo bixidda ballanqaadyada xulufada caalamiga ah ee Soomaaliya, iyadoo la dhiirigaliyay taageero natiijo ku salaysan.
16:48 Shirka ayaa isku raacay in Soomaaliya ay samaysay horumar la taaban karo.
16:45 Halkaasna waxaa lagu soo gabagabeeyay shir saxaafadeedka ay madaxwaynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron saxaafadda u qabteen.
16:44 Waxaan kala hadalnay buu yiri madaxwayne Xasan in Qaramada Midoobay ay yeelanayaan hal maamul, taas oo ah wax wanaagsan.
16:43 Bilowga cusub ee Soomaaliya, waa in wadahadal dhab ah aan la yeelanay qaramada midoobay.
16:43 David Cameron, waxaan isku raacnay buu yiri hal qorshe oo ah kan madaxwaynaha Soomaaliya.
16:42 Waxaa uu madaxwaynuhu sheegay in dalalka deriska ay u muujiyeen dowladiisa taageero.
16:40 Waxaa uu sheegay qorshahoodu ahaa mid la tashi laga sameeyay oo matalaya guud ahaan Soomaaliya.
16:38 Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in uu la tashi la sameeyay dhamaan maamulada Soomaaliya o uu sheegay in uu u bandhigay qorshaha ay shirka la tagayaa.
16:37 Labada mas'uul ayaa ka hadda ka jawaabaya su'aalaha ay saxaafaddu waydiinayso.
16:36 "Goor dhow Soomaaliya waxay noqon doontaa mid ka duwan siday hadda tahay." Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud.
16:35 Waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhowaynta bulshada caalamka ee shirka ka qaybgalayaashiisu u muujiyeen.
16:34 Waxaa jira saansaan soo kabsasho Soomaaliya, waana in taas laga faa'idaystaa.
16:33 Waqtigii Soomaaliya la caawin lahaa waa hadda ayuu yiri madaxwaynuhu.
16:33 Jawaabta aan maanta helnay waa mid na dhiirigalinaysa ayuu yiri madaxwayne Xasan.
16:32 Madaxwaynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in hadafkoodu yahay in la helo Soomaaliya oo si buuxda u xasiloon.
16:31 Wuxuu sheegay in caalamku Soomaaliya wax kala qaban doono qorshayaasha madaxwaynaha uu soo bandhigay.
16:31 Soomaalida ayaa shirku isku raacay buu yiri in si buuxda looga taageero dhinaca sugidda amniga, horumarinta cadaaladda iyo sidii dowlad u noqon lahayd mid si buuxda u hanata dalkeeda.
16:30 Waxaa uu David Cameron sheegay in maanta bulshada caalamku ay taageertay dowladda Soomaaliya.
16:29 Al-Shabaab waa la wiiqay ayuu yiri, halistoodiina meesha waa laga hortagayaa.
16:28 Ma ogolaanayno ayuu yiri qaladkii sagaashameeyadii aan ka samaynay Afghanistan.
16:27 Waxaa hadda soo galay madaxwaynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Britain, David Cameron oo markiiba khudbad bilaabay.
16:08 Madaxwaynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa markii uu shirku sii dhamaanayay weriye ka dhex qayliyay saxaafadda uu waydiiyay sababta uu shirka u joogo, isagoo ku jawaabay 'For a good reason' Sabab wanaagsan.
16:07 Weriyaha BBC Farxaan Maxamed Jimcaale oo halkaas ku sugan wuxuu noo sheegay in saxaafadda caalamka iyo tan Soomaalidaba ay aad u joogaan goobta.
16:00Waxaa hadda weriyayaashu ku sugan yihiin wasaaradda arrimaha dibedda, iyadoo la sugayo in madaxwaynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Britain oo shir jaraa'id halkaas ku qabanayo.
15:56 Wuxuu ka hadlay dhibaatada al-Shabaab ay ku hayaan guud ahaan gobolka, gaar ahaanna dalka Soomaaliya.
15:55 Ra'iisul wasaaraha Ethiopia HaleMariam Desalegn oo furitaankii shirka ka hadlay ayaa aad ku nuux nuuxsaday xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya.
15:50 Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in shirka wixii ka soo baxay ay lagama maarmaan tahay in hirgaliyo oo aysan noqon mid qoraal ku koobnaata.
15:47 Afyare Cilmi oo ah aqoonyahan wax ka dhiga Jaamacadda dalka Qatar, ayaa walwal ka muujiyay in shirka uu maro wadadii shirarkii hore.
15:45 Dhinaca kale waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay dibadbax dad badan isugu soo baxeen oo lagu muujiyay masawirada ra'iisul wasaaraha Britain, Madaxwaynaha Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya.
15:41 Waxaa kaloo ku dibedbaxayay goobtaas taageerayaasha mucaaradka dalka Djibouti, maadaama ka qaybgalayaasha shirka uu ka mid yahay madaxwaynaha Djibouti oo ku dhaliilayaal sida uu dalka u maamulo.
15:37 Waxaa kaloo ku sugan xarunta shirka ee Lancaster House dibedeeda dibadbaxayaal kale oo qaarkood ka soo horjeedaa Somaliland, oo taabacsan maamul goboleedka Khatuma.
15:33 Waxaa uu sheegay in dibadbaxyo kala nooc ah ay socdaan, oo isugu jiro qaar looga soo jeedo diidmada dowladda ee qaabka maamulka loogu samaynayo gobolada Jubbooyinka ee ay wadaan dad taageersan waxa loogu yeeray Jubaland.
15:29 Weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen Shiine ayaa la kulmay dadka ku dibadbaxaya meel u dhow Lancaster House.
15:18 War ka soo baxay Maraykanka, ayaa lagu sheegay in caawintooda Soomaaliya looga gol leeyahay sidii loo heli lahaa dowlad salka dhigata.
14:52 Dibadbaxayaasha oo isku darka gaaraya ilaa 300 oo qof ayaa kala mataya mucaaradka Djibouti, Khatumo State iyo taageerayaasha shirka maamul u samaynta Kismaayo.
14:50 Banaanbaxyada ayaa ah kuwo ujeeddo badan.
14:48 Bannaanbaxyo ayaa ka socda goob u dhow halka uu shirku ka dhacayo.
14:36 Arrimaha shirkan diiradda lagu saarayo waxaa ugu weyn sidii taageero dhaqaale loogu heli lahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si wax uga qabto dhibaatooyinka xagga ammaanka, dhaqaalaha, caddaaladda.
14:32 Goor dhow ayaa la soo saarayaa war murtiyeedka shirka maanta ka dhacay xarunta Lancaster House ee magaalada London.
12:54 Jawaabo kala duwan ayaa laga bixinayaa shirka.
12:50 Shirka ayaa lagu wadaa in maanta in lagu soo gabagabeeyo shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayaan Ra'iisul wasaare Cameron iyo madaxwaynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
12:45 Wuxuu u mahadceliyay Qaramada Midoobay, Maraykanka, UK, Midowga Europem Turkiga, Norway, Ururka Jaamacadda Carabta iyo dalal kale.
12:42 Madaxwaynaha ayaa xusay in Soomaaliya ay dalbanaynso waxqabad hagar la'aan ah, iskaashi iyo taageero.
12:29 Madaxwaynaha ayaa sheegay in xasiloonida Soomaaliya ay hadda muhiim ugu tahay mustaqbalka dalka, amniga gobolka iyo dunida inteeda kale iyo sidii burcad-badeednimada looga xorayn lahaa goobaha ay ku xoog badan yihiin ee Gacanka cadmeed.
12:28 Madaxda ayaa hadda ku jira wadatashiyo, oo shirku wali waa socdaa.
12:26 Madaxwaynaha ay sheegay in uu hiigsanayo sidii dowladda Federaalka Soomaaliya ay u noqon lahayd mid iyada kala nabadgasha, derisku ka nabadgalaan, isla markaana aan dunida inteeda kale qatar ku ahayn.
12:24 Madaxwaynaha ayaa sheegay in Soomaaliya u baahan tahay in la taageero, loo baahan yahay caawinaad iyo maalgalin iyo in laga ilaaliyo kuwa isku dayaya ayuu yiri in ay na burburiyaan.
12:19 Madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Somalia kala meel dhigay geed uu ka beeray gudaha Villa Soomaaliya oo u baahan in waraabiyo, oo la quudiyo isla markaana laga ilaaliyo xoolaha.
12:18 Madaxwaynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa la guddoominaya shirka ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron.
12:15 Madaxda gobolka oo dhan ayaa hadalo ka jeediyay furitaankii shirka.
12:13 Ergooyin ka socda in ka badan konton dal iyo ururo caalami ah ayaa ka qaybgalaya shirka.
12:12 Ra'iisul wasaare David Cameron, ayaa intaa ku daray in dowladda Soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinaca Daah-furnaanta iyo xisaabtanka.
12:10 Si looga hortago buu yiri, ra'iisul wasaare David Cameron, barkac ballaaran iyo dhoofinta argagixisada.
12:10 Ra'iisul wasaaraha Britain oo goor hore ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ay muhiim tahay dib u dhiska Soomaaliya.
12:08 Waxaa Cabdiraxmaan uu sheegay in madaxwaynaha iyo wafdigiisu ay rajo badan ka qabaan shirka.
12:07 Cabdiraxmaan Yariisoow, afhayeenka madaxwaynaha ayaa sheegay in qorshayaasha ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidamada, sugidda amniga, cadaaladda.
12:03 Dhamaan dalalka deriska ayaa shirka goobjoog ku ah, sida Uganda, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti.
11:58 Shirka ayaa hadda laga soo laabtay waqtiga nasashada, oo dib u furmay.
11:35 Halkan kala soco qoraal toos ah oo ku saabsan shirka hadda ka socda Xarunta Lancaster House ee magaalada London.